फेरि लमजुङमा ३ घण्टा नबित्दै ५. ३ म्याग्निच्युडको भूकम्प – Dailny NpNews
फेरि लमजुङमा ३ घण्टा नबित्दै ५. ३ म्याग्निच्युडको भूकम्प
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: १२:००:३५
काठमाडौं । लमजुङमा आज बिहान ३ घण्टा नबित्दै फेरि भूकम्प गएको छ। बिहान ५ बजेर ४२ मिनेटमा ५।८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको लमजुङमै फेरि ८ बजेर २६ मिनेटमा ५.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
केन्द्रका अनुसार दुवै भूकम्प लमजुङको भुलभुले आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका हुन्। भूकम्पको धक्का पोखरा, तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ, काठमाडौंमा समेत महसुस गरिएको छ।
काठमाडौंमा बुधबार विहान भूकम्पको दोस्रो धक्का महसुस गरिएको छ । िवहान ८ बजेर २६ मिनेट जाँदा लमजुङ्ग नै केन्द्र विन्दु भएर दोस्रो भूकम्प गएका राष्ट्रय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । आज विहान ५ बजेर ४२ मिनेट जाँदा लम्जुङ केन्द्र विन्दू भएर भूकम्प गएको थियो । यी दूवै गोरखा भूकम्पको पराकम्प भएको बताइएको छ।
यसै भूकम्पका कारण लम्जुङमा सात वटा घर भत्केका छन् । भूकम्पले घर भत्किँदा चोट लागेर तीनजना गाउँले घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार मस्र्याङदी गाउँपालिकाका ४० वर्षीया उमा गुरुङ र ८३ वर्षीया खवकुमारी पाण्डे घाइते भएकी छिन् । अर्का एकजना घाइतेको नाम खुलेको छैन ।
एकाबिहानै आएको भूकम्पले घाइतेको संख्या केही बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रहरीले बताएको छ । भूकम्पको धक्का पोखरा, तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा पनि महसुश गरिएको छ।